30 taona an-tsehatra… : ho vahinin’i Poopy i Njila | NewsMada
30 taona an-tsehatra… : ho vahinin’i Poopy i Njila
Ho “Fampisehoan’ny taona 2016” no fanambin’ny mpikarakara, araka ny hita sy heno anaty dokambarotra. Seho andrasan’ny maro tokoa, indrindra ireo mpankafy hatramin’izay, ny hotontosain’i Poopy ny alahady 28 febroary izao, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Anisan’ny vaovao lehibe nampitaina ny fandraisana anjaran’i Njila amin’ny fampisehoana. Mandalo eto an-tanindrazana, ka nasain’i Poopy hiara-hankalaza aminy ny faha-30 taona an-tsehatra. Rariny loatra, satria tao amin’ny tarika Njila tokoa i Poopy no nanomboka, nialoha ny maha mpanakanto andrarezina azy. “Toa tsaroako foana ny nanaovany voalohany ny “Ilazao””, hoy ny fitantaran’i Njila anatin’ilay dokambarotra.
Fantatra fa saika ireo hira tena nahafantarana sy nanamarika izay 30 taona izay avokoa no halahatr’i Poopy sy ny tariny mandritra io seho io. Maro ireo liana, na dia ny hahita ny fitafian’i Poopy eny an-tsehatra fotsiny aza. “Tonga izao ilay ora”, hoy kosa i Poopy…